HP က DESKJET 1510 ဘို့ DRIVERS တွေကို DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
MFP HP က Deskjet 1510 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download လုပ်ပြီး install
XML ကို - ဒေတာကိုင်တွယ်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒေတာဘေ့စများ၏နယ်ပယ်များအပါအဝင်များစွာသောအစီအစဉ်များ, ထောက်ခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, XML ကိုသို့အချက်အလက်များ၏ပြောင်းလဲခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော application များအကြားအချက်အလက်များ၏လဲလှယ်၏မြင်ကွင်းကို၏အချက်အနေဖြင့်အရေးကြီးသည်။ Excel ကိုဖွင့်စားပွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောအစီအစဉ်များအကြားဖြစ်ပြီး, တောင် databases ကိုအတူခြယ်လှယ်နိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ XML ကိုသို့ Excel ဖိုင်များကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုနားလည်ကြကုန်အံ့။
XML ကို format ကိုသို့ data တွေကိုပြောင်းလဲအထူးအစီအစဉ် (schema.xml) အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်၎င်း၏သင်တန်းဖန်တီးထားရမည်သို့မှသာရိုးရှင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ဤ format နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖိုင်သို့သတင်းအချက်အလက်များပြောင်း Excel ကို tools များအတွက်မှတပါးလက်ပေါ်ပုံမှန်အတိုင်းရှိသည်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာပုံဖွဲ့စည်းခဲ့ element တွေကိုဖန်တီးဖို့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အစီအစဉ်နှင့်စာရွက်စာတမ်းမှ၎င်း၏ကွန်နက်ရှင်၏ပြင်ဆင်မှုဒါမှသာပါပြီ။
Method ကို 1: ရိုးရှင်းတဲ့ထိန်းသိမ်းရေး
Excel ကို, သင်ရိုးရှင်းစွာ menu ကိုသုံးပြီး XML ကို format နဲ့ဒေတာကိုကယျတငျနိုငျ "Save As ကို ... "။ သို့သျောလညျး, ထို့နောက်အားလုံးအစီအစဉ်များသည်ဤလမ်းအတွက်ဖန်တီးခဲ့သောဖိုင်နှင့်အတူမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်ကိုအဘယ်သူမျှမအာမခံချက်လည်းမရှိ။ ထိုမျှမကအားလုံးကိစ္စများတွင်, ဒီနည်းလမ်းကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Run ကို Excel ကို။ အဆိုပါ tab ကိုမှသွားလာရင်းပြောင်းလဲခံရဖို့တစ်ဦးကို item ဖွင့်လှစ် "File"။ ထို့နောက်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
ဝင်းဒိုးကိုဖိုင်တွေမဖွင့်ပြေး။ ကျနော်တို့လိုအပျကွောငျးဖိုင်ကို် directory ကိုသွားပါ။ XLS သို့မဟုတ် XLSX - သူကို formats Excel ကိုတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့် button ကို click "ပွင့်လင်း"ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, file ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်၎င်း၏ဒေတာကလက်ရှိစာရွက်ပေါ်တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။ တဖန် tab ကိုသွားပါ "File".
အဲဒီနောကျ, အပိုဒ်ကိုဖွင့် "Save As ကို ... ".
window ကိုဖွင့်လှစ်သိမ်းဆည်းပါ။ သင်ပြောင်းလဲ file ကိုသိမ်းထားဖို့လိုတဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့ပြောင်းလဲပါ။ သို့သျောလညျးသငျသညျအကြောင်း, ထို program ကိုကမ်းလှမ်းသောတဦးတည်းဖြစ်ပါသည်, စွန့်ခွာခြင်းနှင့် default အ directory ကိုပေးနိုင်သည်။ တစ်ဦးဆန္ဒလည်းမရှိဆိုပါကတူညီသော window တွင်, သငျသညျဖိုင်အမည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလယ်မှပေးဆောင်ရပါမည် "File အမျိုးအစား"။ လယ်ပြင်ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စာရင်းကိုထုတ်ဖော်။
ကျနော်တို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏နာမတော်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲမှာ "ဒီ XML ကို 2003 စားပွဲတင်" သို့မဟုတ် "XML ကို-data ကို"။ ဤပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ထို့ကြောင့် XML ကို format နဲ့မှ Excel ကိုကနေဖိုင်တစ်ဖိုင်၏ပြောင်းလဲခြင်းကျူးလွန်ခံရဖို့။
Method ကို 2: ရေးသားသူ Tools များ
XML ကို format နဲ့မှ Excel ကို convert, သင် program ကို tab ကိုအပေါ်ပြုစုရေးကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကိုမှန်ကန်စွာပြုလျှင်မှန်ကန်စွာ Third-party application များသဖြင့်ရိပ်မိပါလိမ့်မည်သည့်ယခင်နည်းလမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသော XML ကို-ဖိုင်, ဆန့်ကျင်အဖြစ်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို့နောက်အထွက်ကလက်ခံ၏။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုမတိုင်းအစပြုသူချက်ချင်းဤနည်းအတွက် data တွေကိုပြောင်းလဲသင်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်နိုင်သည်ကိုတခါမှာဆိုရရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အပြုစုသူကိရိယာများ tab ကိုပိတ်ထားသည်။ ထိုကွောငျ့, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, သင်ကကိုသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ tab ကိုမှဖွင့် "File" နှင့်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "န့်သတ်ချက်များ".
settings ကိုပြတင်းပေါက်များတွင်ပုဒ်မခွဲများတွင်ရွေ့လျားနေကြသည် "ဟုအဆိုပါဖဲကြိုးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ"။ ညာဘက် pane ထဲကကိုခန့်၏ကို tick တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ "ရေးသားသူ"။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ"ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး။ ပြုစုသူကိရိယာများ tab ကိုယခု enabled ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်မည်သည့်အဆင်ပြေလမ်းအတွက် Excel ကို spreadsheet program ကိုဖွင့်လှစ်။
ယင်း၏အခြေခံပေါ်မှာကျမတို့ကလည်းဘယ် text editor တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းသော schema ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဤအရည်ရွယ်ချက်များ, သင်ထားတဲ့သာမန်မှတ်စုစာအုပ်ကို Windows ကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သူက Notepad ++ markup ဘာသာစကားများနှင့်အတူ programming နဲ့အလုပ်များအတွက်အထူးပြု application ကိုသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ကျနော်တို့ကဒီ program ကို run ။ ဒါဟာ schema ဖန်တီးပေးပါတယ်။ Notepad ++ ပြတင်းပေါက်အောက်ကမျက်နှာပြင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာထဲမှာကကိုကြည့်လိမ့်မယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, တစ်ခုလုံးအဖြစ်စာရွက်စာတမ်း၏ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲဖြစ်ပါသည် "ဒေတာများကို-set ကို"။ တစ်ခုချင်းစီကိုလိုင်းများအတွက်တူညီအခန်းကဏ္ဍများတွင်၎င်း tag လုပ်ဆောင် "မှတ်တမ်း"။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကျနော်တို့စားပွဲ၏နှစ်ခုသာတန်းစီယူလျှင်အလုံအလောက်ဖြစ်မည်, XML ကိုလက်ဖြင့်အားလုံးဘာသာမမည်။ အဆိုပါကော်လံ၏နာမကိုအမှီဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ် tag ကိုမတရားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အဆင်ပြေဘို့ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာကော်လံ၏ရုရှားဘာသာစကားအမည်များကိုဘာသာပြန်ဆိုကြိုက်တတ်တဲ့။ ဒေတာထဲသို့ဝင်ပြီးတာနဲ့ရိုးရိုးလေးလို့ခေါ်တဲ့ XML ကို format နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့် hard disk ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့စာသားကိုအယ်ဒီတာမှတဆင့်သူတို့ကိုကြိုတင်ယူထား "စီမံချက်".
တနည်းကား, တစ်ပြီးသားပွင့်လင်းစားပွဲပေါ်မှာအတူ Excel ကို program ကိုသွားပါ။ အဆိုပါ tab ကို Moving "ရေးသားသူ"။ အဆိုပါ Tools များအပိုင်းအတွက်ဖဲကြိုး, တွင် "XML ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီရင်းမြစ်"။ ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ဒိုးကိုကလစ်၏လက်ဝဲဘက်မှာလယ်ပြင်၌ "ဒီ XML ကို Maps ကို ... ".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Add ... ".
အရင်းအမြစ်ကို select လုပ်ပါ screen ကိုပြေး။ အစောပိုင်းအထိရေးဆွဲအစီအစဉ်၏ directory ကိုတည်နေရာကိုသွားပါ, ဒါကြောင့်ကို select နှင့် button ကို click "ပွင့်လင်း".
တိုက်နယ်ဒြပ်စင်ပြတင်းပေါက်၌ထငျရှားပွီးနောကျ, စားပွဲကော်လံအမည်များသင့်လျော်သောဆဲလ်အတွင်း cursor သူတို့နှင့်အတူဆွဲယူပါ။
ရလဒ်စားပွဲပေါ်တွင် mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါဖြတ်လမ်း menu ကိုတွင်မှတဆင့်လမ်းညွှန် "XML ကို" နှင့် "ပို့ကုန် ... "။ ထို့နောက်မည်သည့် directory ထဲတွင်ဖိုင်ကို save လုပ်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, XML ကို Microsoft က Excel ကိုအစီအစဉ်ကို format နဲ့ XLS နှင့် XLSX ဖိုင်တွေကို convert နှစ်ခုအခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးအလွန်အမင်းရိုးရှင်းနှင့် function ကို၏ပေးထားသော extension ကိုအတူယူနစ်သိမ်းဆည်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၌တည်ရှိ၏ "Save As ကို ... "။ ဒီဂျ၏ရိုးရှင်းများနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတဦးတည်းကအရမ်းလေးနက်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ပြောင်းလဲခြင်းအခြို့သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲပြုမိသောကြောင့်ဤနည်းတစ်ခုပြောင်း file, third-party application ရိုးရှင်းစွာအသိအမှတ်ပြုမည်မဟုတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ option ကို XML ကိုမြေပုံ၏ပြင်ဆင်မှုပါဝငျသညျ။ ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမတူဘဲ, စားပွဲပေါ်မှာအားလုံး XML ကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီမည်အစီအစဉ်အောက်တွင်ပြောင်းလဲနေသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာမဟုတ်ဘဲတိုင်းအသုံးပြုသူအလျင်အမြန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။